Shakhsiyada Muslimka ah
Mustalah Al Xadiis
Fadliga bisha Barakeysan ee Ramadan iyo siyaabaha aad uga faa'iideysan karto....
Fadliga bisha Barakeysan ee Ramadan iyo siyaabaha aad uga faa'iideysan karto...
Fadliga bisha Barakeysan ee Ramadan iyo siyaabaha aad uga faa'iideysan karto..
Fadliga bisha Barakeysan ee Ramadan iyo siyaabaha aad uga faa'iideysan karto.
Fadliga bisha Barakeysan ee Ramadan iyo siyaabaha aad uga faa'iideysan karto
Tuesday April 28, 2020 - 20:42:34 in Maqaallo by Super Admin
Tusaale ahaan waxaaad arkaysaa qof qushuucsan oo ku dadaalaya cibaada illaahay, laakiin aad uga gaabinaya xidhiidhinta ehelkiisa (Riximkiisa), waxaad arkaysaa qof ku dadaalaya barashada cilmiga iyo cibaadada laakiin ka gaabinaya tarbiyada caruurtiisa
Tusaale ahaan waxaaad arkaysaa qof qushuucsan oo ku dadaalaya cibaada illaahay, laakiin aad uga gaabinaya xidhiidhinta ehelkiisa (Riximkiisa), waxaad arkaysaa qof ku dadaalaya barashada cilmiga iyo cibaadada laakiin ka gaabinaya tarbiyada caruurtiisa isagoo ka war hayn waxa ay bartaan iyo cida ay la saaxiibo yihiin. Waxaad arkaysaa nin caruurtiisa si fiican u tarbiyadaynaya laakiin waalidki si xun ula dhaqmaya. Waxa aad arkaysaa qof waalidkii u samo-falaya laakiin xumaynaya gabadha uu qabo iyo ehelkeeda, sidoo kale waxaad arkaysaa qof ku wanaagsan Gabadha uu qabo laakiin jaarkiisa xumaynaya.
Dr. Maxamed Ali Haashimi
Waxaad arkaysaa qof ku dadaalaya danihiisa gaarka ah iyo wixii isaga anfacaya, laakiin aad uga gaabinaya xidhiidh uu ummada islaamka iyo is kaashigeeda. Waxaad arkaysaa qof haysta diinta islaamka laakiin dhayalsanaya eedaabta islaamka ee salaan, wax cunida, cabida, la hadalka dadka iyo la sheekooyinkiisa iyo kuwa kale oo badan.
Waxa wax lala yaabo ah in nusqaamahan lagu arko kuwo daaciyiin ah oo iyagu ah hormoodkii islaamka iyo kuwa iyagu dadka tilmaami lahaa, waana kuwa loo baahan yahay in ay si xeel dheer u fahmaan axkaamta islaamka, eedaamteeda iyo qiimaheeda si ay umada ugu hogaamiyaan dariiqa saxda ah. Laakiin waxa mashquuliya in badan dhayalsiga iyagoo dareensan ama aan dareensanayn.
Sifatu Salaatu Nabi
28/04/2020 - 20:42:34
Fadliga bisha Barakeysan ee Ramadan iyo siyaabaha aad uga faa'iideysan karto.......
26/04/2020 - 04:49:11
Fadliga bisha Barakeysan ee Ramadan iyo siyaabaha aad uga faa'iideysan karto.....
26/04/2020 - 04:48:59
Fadliga bisha Barakeysan ee Ramadan iyo siyaabaha aad uga faa'iideysan karto......
26/04/2020 - 04:42:32
Gabayadii Ugu Dambeeyay
Su'aalihii Ugu Dambeeyay
Khudbadihii Ugu Dambeeyay
Muxaadarooyinkii Ugu Dambeeyay
Warbaahinta Baraarug Media waa warbaahin islaami ah oo si mutadawacnimo ah ugu adeegta guud ahaan umadda ku hadasha Af-Soomaaliga.
Baraarug Media waxa ay si joogta ah u soo gudbisaa Duruus Diini ah oo ay akhrinayaan Culimada Soomaaliyeed ee ku kala sugan Dunida dacalladeeda.
Howlaha Warbaahinta Baraarug Media waxaa socodsiiya dad mutadawiciin ah oo waqtigooda, hantidooda iyo xoogooda u bixiya Allah dartiis.
© Xuquuqda website-kan waxa ay u gaar tahay Baraarug Media 2010 - 2020